Engeeg wasakhda Warshad, Shirkado - Shiinaha engeeg Nalalka soo saarayaasha
Toogasho bir ahwaxaa laga sameeyaa birta kaarboonka dhalaalida iyo sameynta. Waxaa si ballaadhan loogu isticmaalaa sidii wax lagu nadiifiyo nadiifinta, hoos u dhigida, udiyaar garowga dusha sare iyo xoqidda tallaalka Cabirkeeda kaladuwan ayaa go'aamin doona ultiate-ka la dhammeeyay ee lagu gaadhay dusha sare ee qalabka shaqada si loo qarxiyo.
Qalabka birta ahwaxaa laga jajabiyaa tallaalka birta ee kaarboonka sarreeya, oo loo heli karo saddex nooc oo adkaansho ah. leh qaab xagal ah, waa ka saarista wasakhda dusha sare iyo lakabyada si dhakhso leh oo waxtar leh.
Qaadista birta birta ah
Qaadista Birta Gritwaxaa lagu sameeyaa iyadoo la burburinayo bir been abuur ah oo been abuur ah. Waxaa markii hore la soo saaray oo loo adeegsaday warshadaha dhagaxa dhagaxa oo hadda sidoo kale si fiican loogu aqbalay hawsha qaraxa sababta oo ah waxqabadkeeda sare.
Xulka wasakhda warbaahinta
Isbuunyada Warbaahinta isku xoqdowaxaa lagu heli karaa in ka badan 20 nooc, gaaritaanka astaamaha 0 illaa 100 + micron. Dhammaan waxay soo saaraan qallalan, boodh hooseeya, qarax dib-u-celin yar.
Waxaan ka bixinnaa silig jarjar bir ah silig bir ah oo cusub iyo silig duug ah oo duug ah labadaba.
Joogtaynta nolosha daalka badan ee xoogga sare, hoos u dhig qiimaha isticmaalka.
Wareeg wanaagsan oo hadhuudh ah, cabbirka lebiska, oo aan jabin inta lagu guda jiro isticmaalka, tayada fiiqista sare.
Badanaa kharash-ku-ool ah marka loo isticmaalo fiiqidda qaybaha qaybaha medchnical leh kala-duwanaanta adag ee HRC40-50.
Ahama Steel Go Wire toogtaywaxaa lagu sameeyaa iyadoo la jarjarayo silig bir ah oo aan lahayn birta. Waxaa lagu sii shardi karaa darajooyin kala duwan iyadoo loo eegayo macaamiisha adeegsiga kala duwan.
Dahaarka birta ahama waa ahama angular angular. Badanaa waxaa loo isticmaalaa nadiifinta dusha sare, ka saarista rinjiga iyo soo dejinta biraha aan birta ahayn iyo alaabada birta aan lahayn, sameynta qallooc dusha sare leh, sidaas darteedna si gaar ah ugu habboon dusha sare ee dusha ka hor inta aan la dahaadhin.
TAA kaarboonka bainite biraha yar sidoo kale loo yaqaan Toogashada birta LCB.
Maaddaama ay tahay soo saaraha hormuudka u ah birta la xoqin doono, TAA Birta waxay ku sii adkeysanaysaa hagaajinta tayada wax soo saarka iyo soo saarista wax soo saar cusub sannadihii la soo dhaafay. TAA LCB xoqid abrasive waa wax soo saar heer sare ah kadib mudo toban sano ah cilmi baaris iyo horumarin, taas oo ah iskudarka ugufiican ee teknoolojiyada yar yar ee TAA iyo teknoolajiyada lahaanshaha, AS oo ah warbaahinta wax toogata ee toogashada la doonayo LCB isku qasan abrasivewaxaa lagu dabaqayaa atl beeraha laxiriira toogashada iyo ciida ciideeda. Waxqabadka firfircoon ee Jt wuxuu ka caawin karaa dadka isticmaala inay badbaadiyaan 50% qarashkooda ku qarxa toogashada.
Silig Aluminium gooyay
Aluminium tallaalka siligga ah sidoo kale loo magacaabay sida aluminium shot, alwaax aluminium, granules aluminium, pellet aluminium.
Zinc silig la jaray
Zinc jeex jeex silig ah sidoo kale loo magacaabay toogashada zinc, sintarka sintiga, kuulyada zinc, qarxinta silig-jarista zinc. Way ka jilicsan tahay birta, birta birta ah, birta ama alaabada siligga la gooyey.
Aluminium bunni ahwaxaa lagu dhex qasay oo lagu qariyay heerkulka sare ee isku darka bauxite iyo alaabada kale iyo ceeriin Waxaa lagu gartaa adayggiisa sarreeya, adkaanta wanaagsan iyo qaabka cabbir ahaan.
Xarig jarjar Copper
Copper shot silig toogashowaxaa lagu soo saaray iyadoo laga gooyo silig naxaas ah oo loo galiyay jajab, dhererka u dhigma dhexroorka siligga. badanaa waxaa loo isticmaalay qaraxan daweynta dusha sare. Waxaa sidoo kale loogu yeeraa sidaxabbad naxaas ah, silig naxaas ah oo silig jar ah, xabbad naxaas ah oo la gooyey, kuul naxaas ah, dhagaxyada naxaasta ah iwm. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba qaab goos goos ah ama shuruudaysan.